अर्बौंको सरकारी जग्गा गुम्न लागेपछि हायात होटल छानविनमा – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७३ मंसिर ७, मंगलवार) २३:०३
पूर्वाधारका हिसाबले देशकै ठूलो पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सीमा ‘व्यवस्थापनले जालझेल गरी राज्यको सम्पत्ति हडप्न खोजेको’ भन्दै सरकारले छानबिन सुरु गरेको छ। यो होटल जोरपाटीस्थित एक सय ५० रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण भएको हो। त्यसैबापत सुरुआतमा सरकारको भागमा ३९ प्रतिशत सेयर परेको थियो। तर, होटलको निजी साझेदारले ‘जालझेल गरी’ सरकारको हिस्सा ९ प्रतिशतमा झारिदिएको आशंकामा छानविन अघि बढाएको छ। यही गतिमा अघि बढे केही वर्षभित्रै सरकारी सेयर निल हुने र अर्बौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा पूर्ण रुपमा निजी कम्पनीको हुने स्थिति आएपछि सरकारले छानबिन थालेको हो।
जोरपाटी जाने मूल सडकमा जोडिएको हायात होटलले भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ मात्र हिसाब गर्दा पनि अहिले यसको बजार भाउ १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। यही जग्गाबापत सरकारले पाएको सेयरको बजार भाउ भने १५ करोड रुपैयाँ मात्रै छ।
होटल व्यवस्थापनले गलत हिसाब प्रस्तुत गरेर ठग्न खोजेको शंकापछि सरकारले होटल सञ्चालक समितिमा सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलको संयोजकत्वमा तिन सदस्य छानविन समिति गठन गरेको थियो। छानविनका लागि जति ताकेता गर्दा पनि व्यवस्थापनले हिसाब देखाउन र मागेको विवरण दिन अटेर गर्दै आएको अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलले बताए।
‘छानबिनका लागि चाहिने कुनै पनि सूचना र विवरण होटल व्यवस्थापनले दिएन। उनीहरूले हामीलाई पूरै असहयोग गरे,’ छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका लुइँटेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘सकारले मन्त्रालयमार्फत काटेको पत्रको पनि जवाफ दिएन। हामी यही बेहोरा खुलाएर आउँदो शुक्रबार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं।’
नेपाल सरकार अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले २०४९ सालमा एक सय ५० रोपनी जग्गा हायात होटल बनाउन दिएको थियो। त्यतिबेला प्रतिरोपनी १० लाखका हिसाबले जग्गाको १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको थप २ करोड गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ सरकारको लगानी मानिएको थियो।
व्यवस्थापन सम्हालेको निजी साझेदारले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म होटलमा नाफा देखाएको छैन। सरकारले यसबाट एक पैसा प्रतिफल पनि पाएको छैन। उल्टो निजी साझेदारले होटल घाटामा गएको देखाएर लगानी बढाउँदै लगेको देखाएको छ। निजि साझेदारले लागनी बढाउदै लागेको देखाएपछि सरकारको सेयर हिस्सा घट्दै गएको छ।
‘होटलले पारदर्शी तरिकाले हिसाब देखाएको छैन, घाटामा गएको देखाएर लागत बढाइँदैछ,’ लुइँटेलले भने, ‘सरकारको सेयर स्वामित्व निरन्तर घट्दो छ।’
यतिमात्र होइन, हायातले समितिबाट थप एक सय ५४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ। उक्त जग्गाबापत होटलले वार्षिक जम्मा ३० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरेको लुइँटेलले बताए।
२०४९ असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति, आइसिटिसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफबीच भएको सम्झौताअनुसार हायात होटलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत सेयर थियो।
नाफामुखी प्रयोजनमा खुलेको होटल व्यवसायका लागि यति ठूलो सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा उपलब्ध गराउनु नै त्यति बेला ठुलो नीतिगत त्रुटि भएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसमाथि सम्झौताको बेला र पछि पनि सरकारले पटक–पटक गरेको गलत निर्णयका कारण अर्बौंको सम्पत्ति गुम्ने जोखिम बढेको छ। यो स्थिति आउनुमा होटल सञ्चालक समितिमा रहेका सरकारी प्रतिनिधिको पनि हात छ। उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि निजी साझेदारका बदमासीको मतियार बनेको अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए।
सुरुमा होटल सञ्चालक समितिमा सरकार तर्फबाट तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो। पछिल्लो समय सेयर अनुपात घटेपछि सरकारको प्रतिनिधित्व संख्या एकमा झारिएको छ। यसले लामो समयदेखि बोर्ड मिटिङमा सरकारी प्रतिनिधिले भागै लिएका छैनन्। निजी साझेदारले आफूखुसी गर्ने छुट पाएका छन्।
यो परियोजनामा निजी साझेदारले झेलझाल गरेको प्रष्ट देखिएको अध्यक्ष लुइटेल बताउछन्। ‘कतिसम्म जालझेल गरिएको छ भने, होटलमा सरकारको लगानी प्रस्ट देखिन्छ, तर निजी साझेदारहरू सर्राफ समूह र आइसिटिसीले कहाँ, कति लगानी गरेको हो देखाउन सकेको छैन,’ लुइँटेलले भने।
उनका अनुसार होटल बनाउन तारागाउँ विकास समितिको एक सय ५० रोपनी जग्गा नै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय सस्थामा धितो राखेर ऋण निकालिएको थियो। आइसिटिसी र सर्राफ समूहको लगानी भनेको होटल डिजाइनमा भएको खर्च नै हो। वास्तुकला डिजाइनमा मात्रै २४ वर्षअघि ४ करोड र आन्तरिक डिजाइनमा ४५ करोड लगानी गरेको होटल व्यवस्थापनको दाबी छ।
एकातिर निजी साझेदारले परियोजा घाटामा गएको देखाएर सरकारी सेयर घटाएको घटाई छन्, अर्कोतिर आँफुभने अन्य लगानीकर्ताको सेयर पनि विस्तारै आफैं किन्दै छन्। यो परियोजना निरन्तर घाटामा गएको छ भने किन होटल व्यवस्थापनमा रहेका निजी साझेदारहरु अरु लगानी कर्ताको सेयर धमाधम आँफै किन्दै छन्? यो प्रश्न आँफैमा महत्वपूर्ण छ।
यो परियोजनामा दातृ संस्था एसियाली विकास बैक (एडिबी) ले पनि ऋण लगानी गरेको थियो। पछि उसले आफ्नो सेयर बिक्री गर्यो। एडिबीका नेपालस्थित आवासीय निर्देशक योकोयामा किम्चीले ‘होटल निरन्तर घाटामा गएपछि लगानी सुरक्षित नदेखेर बिक्री गरेको’ बताएका छन्।
एडिबीले बेचेको सेयर हायातकै अर्को प्रवद्र्धक कम्पनी डोमिनियन इनभेस्टमेन्टले २१ करोड ६० लाख रुपैयाँमा किनेको हो। एडिबीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँको सेयर ६९ रुपैयाँ ६७ पैसामा बेचेको थियो।
हङकङमा दर्ता भएको डोमिनियन इनभेस्टमेन्ट कम्पनी तारागाउँकै मुख्य प्रवद्र्धक अरुण सर्राफको भएको सरकारी स्रोत बताउँछ।
पछिल्लो समय कोरियन डेभलपेमन्ट बैंक सिंगापुरले ४ लाख ९ सय कित्ता अग्राधिकार सेयर र साधारण तर्फको ४२ हजार ७ सय ८० कित्ता सेयर आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीलाई बेचेको छ। त्यस्तै, साधारणतर्फको बाँकी ५ लाख १४ हजार १ सय ७५ कित्ता सेयर डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट र अग्राधिकारतर्फको ४ लाख ४७ हजार डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङलाई बेच्न सैद्धान्तिक सहमति लिएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
हाल होटलमा राधेश्याम सर्राफको १२.२५ र आइसिटिसीको ७.८९ प्रतिशत सेयर छ। त्यस्तै, आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीको १०.०९, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङको २१.६०, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड (बिभिआई) को ९.५३, तारागाउँ विकास समितिको ९.०१ प्रतिशत र सर्वसाधारणसहित अन्यको ३२ प्रतिशत हिस्सा छ। डोमिनियन सर्राफकै मान्ने हो भने उनको लगानी ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ। सुरुमा उनको लगानी ३३ प्रतिशत मात्रै थियो ।
सरकारजस्तै यो परियोजनामा लगानी गर्ने सर्वसाधारणले पनि हालसम्म कुनै प्रतिफल पाएका छैनन्।
स्थापनाकालमा जारी गरेको प्राथमिक सेयरबाट होटल व्यवस्थापनले १२ करोड रुपैयाँ जुटाएको थियो। सर्वसाधारणको ७ करोड २० लाख हकप्रद सेयरबापत थप लगानी भएको छ। सर्वसाधारणको यो लगानीबापत् प्रतिफल भने शून्य छ। होटल प्रत्येक वर्ष घाटामा गएको देखाएर सर्वसाधारणलाई न बोनस सेयर दिइएको छ न त नगद लाभांश।
बैंकहरूको लगानीबाहेक होटलले विदेशी मुद्रामा एक करोड २४ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर कर्जा लिएको थियो। विदेशी मुद्रामा लिएको कर्जामध्ये आधा सेयरमा परिणत गरियो। सेयरमा परिणत भएको कर्जा होटल सञ्चालक सर्राफ समूहले नै खरिद गरेको थियो।
के पायो नेपालले सर्राफ होटल इन्टरप्राइजेजबाट?
विश्वभर ८ वटा कम्पनीमार्फत् १४ वटा होटल सञ्चालन गरिरहेको सर्राफ होटल इन्टरप्राइजेजले नेपालबाटै यो व्यवसाय सुरु गरेको हो। १७ वर्षे उमेरमा व्यवसाय प्रवेश गरेका यसका सस्थापक राधेश्याम सर्राफ सन् १९६३ मा नेपाल आएका थिए। नेपाल प्रवेश गरेको १४ वर्षपछि उनले सन् १९७७ मा याक एन्ड यती होटल खोलेका हुन्।
१९८० मा एसिया होटल्स प्रालिसँगको सहकार्यमा हायात रिजेन्सी खोलेको १७ वर्षपछि नेपालमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडअन्तर्गत हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा आयो।
राधेश्यामका छोरा अरुणले ८ वटा कम्पनीअन्तर्गत भारतमा १० वटा होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् भने नेपालमा दुईवटा होटल सञ्चालनमा छन्।
याक एन्ड यती होटलको भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सू्चीकरण नवीकरण रकम नतिर्दा लामो समयदेखि कारोबार बन्द छ। नेप्से स्रोतका अनुसार सर्राफ समूहले याक एन्ड यतीलाई पब्लिकबाट प्राइभेट कम्पनी बनाउन खोज्दैछ। ‘उसले होटललाई सूचीकरणबाट हटाउन नेप्सेलाई आग्रह गरिसकेको छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो।
भारतको कलकत्ता, दिल्ली, मुम्बई, अहम्दाबाद, चेन्नई, हाम्पी, राईपुर, गुवाहाटी, लखनउ र बोधगयामा हायातका चेन–होटल सञ्चालनमा छन्।
होटल क्षेत्रमा फड्को मार्न र मुलुकमा एउटा स्तरीय तारे होटलको निर्माण गर्न सर्राफ समूहसँग सहकार्य गरेको नेपालले कुनै लाभ पाएको छैन, बरु एक सय ५० रोपनी जग्गा गुमाउन लागेको छ। काठमाडौंमा सरकारी र सार्बजनिक प्रयोगका लागि जग्गाको अभाव हुँदै जाँदा निजी व्यवस्थापनमा रहेको होटलमा ‘माइनरिटी’ सेयर रहने गरि यति बहुमुल्य जग्गा उपलब्ध गराउनु कति ठूलो नीतिगत त्रुटि थियो भन्ने प्रष्ट देखिएको छ।
(२०७३ मंसिर ७, मंगलवार) २३:०३ मा प्रकाशित